Nyi Mu Yar: အီးဇီးလင့်ခ် ကဒ်သစ်လဲခြင်း
at Saturday, January 10, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar
ခုလို ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . မြန်မာလိုလေး ရေးပြပေးတော့ ဖတ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေပြီး ခေါင်းထဲ တခါတည်း တန်းရောက်သွားတာပေါ့ .
ဒီ ပို့စ် မဖတ်ခင် တစွန်းတစ လောက် သိထားရာကနေ ခုလို အပြည့်အစုံ သိခွင့်ရတဲ့အတွက် ကိုညီမူရာ ရဲ့ အားထုတ်ရေးသားပေးထားတဲ့ စေတနာများအား လေးနက်စွာ ရယူသွားကြောင်း ။ နောက်များ ပို့စ်တွေကိုလည်း ဗဟုသုတရဖွယ် စောင့်စားနေပါမည့် အကြောင်း ။
10 January 2009 at 21:51
ကဒ်ထဲမှာလက်ကျန်က ၅ ဒေါ်လာအောက် နည်းနေပြီဆို ကား စီးတဲ့အခါ ကားပေါ်က စက်က စီမ်းဝါရောင်အချက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၃ ဒေါ်လာရှိမှ ကား၊ရထား စီးသင့် တယ်လို့လည်း လက်ကမ်းစာရွက်မှာ အကြံပေးထားပါတယ်။...
ကဒ်ထဲမှာ စဘော်ငွေ တပြားမှ ချန်ထားဖို့ ့မလိုအပ်ပါဘူး။
ဒါဆို သုည ပြတဲ့ထိတော့ သုံးလို့ရပြီး အနှုတ်ပြတဲ့ထိ သုံးလို့ မရတော့ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါလား
ဟုတ်ပါတယ် အနုတ်ပြလို ့မရပါဘူး ဒါကြောင့် ဘာပဲစီးစီး အနည်းဆုံး ၃ ဒေါ်လာရှိမှ စီးပါတဲ့ဗျား။ ၅ ဒေါ်လာအောက် ကျတာနဲ့ ချက်ခြင်း ပိုက်ဆံဖြည့်ပါလို ့လည်း အကြံပေးထားပါတယ်
သေသေချာချာ ရေးပေးသွားတာလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ bro! ခုထိ လဲရသေးဘူး.. card ကို